Chọrọ onye ọka iwu ịgba alụkwaghịm nke ga-enyere gị aka?
Nye onye ọ bụla, ịgba alụkwaghịm bụ nnukwu ihe. Ọ bụ ya mere ndị ọka iwu ịgba alụkwaghịm ji nọrọ ndụmọdụ gị. Nzọụkwụ mbụ na ịgba alụkwaghịm bụ ịkpọ na onye ọka iwu ịgba alụkwaghịm. Onye ọka ikpe kwupụtara ịgba alụkwaghịm ahụ ma naanị ọka iwu nwere ike itinye akwụkwọ maka ịgba alụkwaghịm ahụ n'ụlọ ikpe.
I choro enyemaka na oghe gi?
Biko kọntaktị ANY D iwu ndị ọrụ
Nye onye ọ bụla, ịgba alụkwaghịm bụ nnukwu ihe. Ọ bụ ya mere ndị ọka iwu ịgba alụkwaghịm ji nọrọ ndụmọdụ gị.
> Ndị ọka iwu ịgba alụkwaghịm anyị na-akwado gị
> Oge ọhụhụ ya na onye ọka iwu ịgba alụkwaghịm? Nke a bụ otu esi akwado!
> Ozi gbasara nhọpụta ahụ
> Kedu akwụkwọ ndị m ga-eweta?
> Divgba alụkwaghịm na ụmụaka
> Companylọ ọrụ nke ya na ịgba alụkwaghịm
> Approachzọ onwe onye na ntuzi aka
Nzọụkwụ mbụ na ịgba alụkwaghịm bụ ịkpọ na onye ọka iwu ịgba alụkwaghịm. Onye ọka ikpe kwupụtara ịgba alụkwaghịm ahụ ma naanị ọka iwu nwere ike itinye akwụkwọ maka ịgba alụkwaghịm ahụ n'ụlọ ikpe. E nwere akụkụ dị iche iche gbasara iwu gbasara ịgba alụkwaghịm nke onye ọka ikpe ga-ekpe ikpe. Ihe omuma atu nke uzo iwu a bu:
• Kedụ ka esi kesaa ngwongwo gị?
• Onye gị na ya bi na ya nwere ikike ịnwe otu akụkụ nke ego ezumike nka gị?
• Gịnị banyere ụtụ isi a na-enweta n'ịgba alụkwaghịm gị?
Your nwere ike inye onye ọlụlụ gị onyinye alim?
• Ọ bụrụ otu a, kedụ alimoni kwa ọnwa?
• Ọ bụrụ n’inwere ụmụ, olee otu esi elebara ihe banyere ụmụaka anya?
• Olee otu esi ahazi nkwado ụmụaka?
Ndị ọka iwu ịgba alụkwaghịm anyị na-akwado gị
Enwere ụfọdụ akụkụ na idozi ịgba alụkwaghịm. Onye ọka iwu ịgba alụkwaghịm si Law & More nwere ike inyere gị aka ma duzie gị ịhazi akụkụ ndị a ka enwere ike. Ndị ọka iwu anyị bụ ọkachamara na ngalaba nke iwu ezinụlọ. You na achọ ịmata ihe anyị ga - emere gị? Biko kpọtụrụ Law & More.
Kpọọ +31 (0) 40 369 06 80
Ntak ịhọrọ Law & More?
Law & More dị Mọnde ruo Fraịde
site na 08:00 ruo 22:00 yana ngwụsị izu site na 09:00 ruo 17:00
Ndị ọka iwu anyị gere ntị n'okwu gị wee gbagote
jiri atụmatụ dị mma maka ime ihe
Ọbịbịa onwe gị
Workingzọ anyị na-arụ ọrụ na-eme ka 100% nke ndị ahịa anyị na-akwado anyị ma na-agbago anyị na nkezi na 9.4
nsogbu onye ahia ya"
Ndị ọka iwu ịgba alụkwaghịm anyị nwere ụzọ nke ha ga-esi soro gị rụọ ọrụ iji chọta ihe ngwọta kwesịrị ekwesị maka ọdịnihu. Anyị na-elele akụkụ ọ bụla gbasara iwu ma gbaa mbọ nweta nsonaazụ kacha mma maka gị.
Isiokwu ndị anyị nwere ike inyere gị aka bụ:
• Ọgbụgba ndụ nke alụkwaghịm;
• Atụmatụ ịzụ ụmụ;
• nkwekọrịta nkwekọrịta;
• Nkesa nke nkwonkwo;
• almụaka ụmụaka;
• alimoni ibe;
• ikike ụmụaka nwere ohere;
• ụgwọ ezumike nka;
• nsonaazụ mkpụrụ ego.
Ọ dị mkpa onye ọka iwu ịgba alụkwaghịm?
Divorcegba alụkwaghịm na-enwe mmetụta dị ukwuu n'ahụ ụmụaka. Ya mere, anyị na-etinye oke uru na ọdịmma nke ụmụ gị
Rịọ ịgba alụkwaghịm
Anyị nwere usoro nke anyị, anyị na gị na-arụkọkwa ọrụ maka idozi nsogbu kwesịrị ekwesị
You ga - akwụ ma ọ bụ nata ego onyinye? Na ole? Anyị na-eduzi ma nyere gị aka na nke a
Want chọrọ ibi iche? Anyị na-enyere gị aka
Oge ọhụhụ ya na onye ọka iwu ịgba alụkwaghịm? Nke a bụ otu esi akwado!
Gị na onye òtù ọlụlụ gị emeela mkpebi ahụ. Na-agba alụkwaghịm. Ma gịnị ga-eme? Nzọụkwụ mbụ dị mkpa mgbe mkpebi a dị oke mkpa bụ ịkpọ ndị ọka iwu ịgba alụkwaghịm. E kwuwerị, mgbe ịgbazi alụkwaghịm, ọ bụghị naanị ọtụtụ ihe bara uru kamakwa okwu ndị metụtara iwu na-ebilite: Gịnị ga-eme ụlọ nkwonkwo gị na izu ụgwọ, dịka ọmụmaatụ? Kedụ ka aga ahazi nkesa nkesa ego na nchekwa akụ? Whonyekwa ga na-elekọta ụmụ gị kwa ụbọchị ma ọ bụ nke ego? Iji nwee ike nyere gị aka dịka o kwere mee, ịhazi ma dekọba ihe niile gbasara iwu gbasara ịgba alụkwaghịm, ọ dị mkpa na onye ọka iwu ịgba alụkwaghịm gị nwere ozi na akwụkwọ niile dị mkpa.
Ozi gbasara nhọpụta ahụ
Mgbe ị na-akwado maka nzukọ gị na onye ọka iwu ịgba alụkwaghịm gị, ọ dị mkpa ka gị na onye gị na ya na-akpabu ikwurịta ọtụtụ ihe dị mkpa. Kedu ka ị ga - esi hụ ọdịnihu mgbe ịgba alụkwaghịm gbasara ụlọ gị na-emekọ ihe ọnụ, ọnọdụ gbasara ego na ụmụ gị nwere ike ime? Ọ bụrụ na nkwekọrịta ga-adịrịrị tupu agbapụta, dịka ọmụmaatụ gbasara ụlọ ma ọ bụ ilekọta ụmụ gị kwa ụbọchị, mgbe ahụ, onye ọka iwu ịgba alụkwaghịm nwere ike ịdị mfe dekọtara nkwekọrịta ndị a na nkwekọrịta ịgba alụkwaghịm na atụmatụ ịzụ ụmụ.
Ọ bụ na ọ gaghị ekwe omume iso onye gị na ya na-akpabu ma ọ bụ ndị gị na ha ga-emekọrịta ihe ma mee nkwonkwo? Mgbe ahụ ị nwere ike ịkpọ ọka iwu ịgba alụkwaghịm nke ga-agba mbọ nweta nsonaazụ kacha mma maka gị. N'ọnọdụ ahụ, ọ ka dị mma, n'ịkwadebe maka nzukọ gị na onye ọka iwu ịgba alụkwaghịm gị, ka ị jụọ onwe gị okwu dị mkpa ị ga-achọ idozi na n'ụzọ ọ bụla. Iji maa atụ, would ga - achọ ibi n ’ụlọ ma lekọta ụmụ gị kwa ụbọchị? N'ọnọdụ a, onye ọka iwu ịgba alụkwaghịm nwere ike ịgwa gị nke ọma ihe ga - ahazi yana ịkwesịrị ime atụmatụ a.
• you bụ onye dịịrị onwe gị?
• need chọrọ ndụmọdụ gbasara iwu?
• want chọrọ nghọta doro anya gbasara ọnọdụ iwu gị?
Mee KWES SCRASE Nyocha ỌGBASEA!
Kpọtụrụ anyị na bọtịnụ ozugbo.
Anyị ga-akpọghachi gị ozugbo o kwere omume.
Kedu akwụkwọ ndị m ga-eweta?
Ọ dị mkpa ịnakọta ụfọdụ akwụkwọ dị mkpa ma weta ya na onye ọka iwu ịgba alụkwaghịm. Nke mbu, ị ga-ewetara akwụkwọ alụm di gị ma ọ bụ nkwekọrịta nkwekọrịta na ikekwe omume gị na nkwekọrịta nke adịchaghị. Akwụkwọ a na-enye ndị ọka iwu nghọta nke gị na ndị gị na ha na-emekọrịta ihe iwu kwadoro ma mekwaa ebe mmalite maka nkwekọrịta ndị ọzọ. Gị na onye gị na ya na-akpabukọ ụlọ nwere ụlọ (ịgbazinye ego)? Ọ bụrụ otu a, ịkwesịrị ka iwebata akwụkwọ ego ma ọ bụ nkwekọrịta gị n'ụlọ nzukọ. Ọnọdụ ego gị dịkwa mkpa maka ịgba alụkwaghịm ahụ. Nwere ike ịnye ọka iwu ịgba alụkwaghịm gị nchịkọta nke akaụntụ akụ gị na / ma ọ bụ akaụntụ nchekwa ego, nkwupụta kwa afọ yana ego ụtụ isi ego atọ ikpeazụ. N’ikpeazụ, ozi gbasara ego ezumike nka, ego mkpuchi ya na ụgwọ ọ bụla ị nwere ike itinye aka dịkwa mkpa.
Divgba alụkwaghịm na ụmụaka
Mgbe ụmụaka tinyere aka, ọ dị mkpa na a na-atụlekwa mkpa ha. Anyị na-ahụ na eburu n'uche mkpa ndị a dịka o kwere mee na usoro ahụ. Ndị ọka iwu ịgba alụkwaghịm anyị nwere ike wepụta atụmatụ ịzụlite nwa na nke ị ga-ekesasị nlekọta ụmụaka gị ka agbazisịrị ịgba alụkwaghịm ahụ. Anyị nwekwara ike gbakọọ ego nwata akwụgo ka akwụ ma ọ bụ nata.
Alreadygbaala alụkwaghịm ma nwee esemokwu gbasara, dịka ọmụmaatụ, nrube isi na onye mmekọ ma ọ bụ onyinye ego? Ka ị nwere ihe mere ị ga-eji kwere na onye gị na ya na-esobu onye nwere ego nwere ego zuru ezu ọ ga-eji na-elekọta onwe ya? Ndị ọka iwu ịgba alụkwaghịm anyị nwekwara ike ịnye gị enyemaka iwu n ’ụdị nsogbu ahụ.
Companylọ ọrụ nke ya na ịgba alụkwaghịm
You nwere ụlọ ọrụ nke gị, ị na-agba alụkwaghịm? Mgbe ahụ ị ga-eburu n'uche akụkụ ndị ọzọ. Ajụjụ ndị ọka iwu ịgba alụkwaghịm anyị ga-enyocha soro gị gụnyere:
Do nwere mbak?
• Ngwongwo ndi a nwere ogbe obodo ha?
• Gịnị na-eme ụlọ ọrụ nke gị?
• Kedụ nsonaazụ nkewapụ maka ụlọ ọrụ gị?
• Nso idi utịp tax?
Ndị ọka iwu ịgba alụkwaghịm anyị maara ma iwu ezinaụlọ yana ọma ahịa, yabụ ekwesịrị iji nye gị enyemaka iwu na ụtụ. You chọrọ onye ọka iwu ịgba alụkwaghịm? Kpọtụrụ Law & More.
Approachzọ onwe onye na ntuzi aka
Agbanyeghị na anyị na akwado ka nkwadebe ụfọdụ tupu gị na gị na onye ọka iwu ịgba alụkwaghịm gị, anyị Law & More Ghọta na ịgba alụkwaghịm bụ nnukwu ihe na ndụ gị, na ị gaghị enwe ike ịkọwa ma mechikwa ọdịnihu gị ozugbo ịgba alụkwaghịm ahụ. Ya mere Law & MoreNdị ọka iwu ịgba alụkwaghịm nwere usoro onwe ha, gị na gị na ma eleghị anya onye gị na ya biburu ka anyị ga-ekpebi ọnọdụ gị dịka oge mkparịta ụka dabere na akwụkwọ ahụ. Anyị ga-akọwapụta ọhụụ gị na ihe ị chọrọ maka ọdịnihu. Ndị ọka iwu ịgba alụkwaghịm nke Law & More Ọ bụ ọkachamara n'ọhịa nke mmadụ na iwu ezinụlọ ma nwee obi ụtọ iduziri gị, ikekwe ọnụ na ndị gị na ha nọ, site na ịgba alụkwaghịm.
Mgbe ahụ kpọtụrụ anyị site na ekwentị +31 40 369 06 80 ma ọ bụ zitere anyị ozi ịntanetị: